Dowladda kmg ah oo sii labo jibaartay barakcinta ay ku hayso dadka degen hareeraha Xeryaha ay degen yihiin Ciidamada shisheeyaha. | Halganka Online
Dowladda kmg ah oo sii labo jibaartay barakcinta ay ku hayso dadka degen hareeraha Xeryaha ay degen yihiin Ciidamada shisheeyaha.
Posted on Abriil 19, 2010 by halganka
Dowladda kmg ah oo mudooyinkii udambeeyay waday ol-ole lagu barakicinayo dadka rayidka ah ee degen hareeraha Xeryaha ay magaalada muqdisho ka degen yihiin Ciidamada shisheeyaha ayaa maalintii shalayto ahayd ugu baaqday dadka degen nawaaxiga Xarunta Madaxtooyada Villa soomaaliya inay halkaasi isaga bara kacaan.
Taliye ka tirsan Ciidamada dowladda kmg ah islamarkaana qaabilsan Amaanka Xarunta Madaxtooyada oo magaciisa lagu soo gaabiyay Caanood ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu u jeediyay qoysaska shacabka ah ee kunool hareeraha Xarunta Maaxtooyada inay halkaasi isaga barakacaan,isagoona sheegay in guryaha halkaasi ku yaala ay la wareegi doonto dowladda kmg ah.
Taliyahan magaciisa lagu soo koobay Caanood ayaa u sheegay qoysaska halkaasi kunool in amarkan uu ka dambeeyay wareegto kasoo baxday Xafiiska Reysal wasaaraha dowladda kmg ah Cumar C/rashiid Cali sharmaarke wuxuuna taliyahaaas uu ku hanjabay in Ciidamada dowladda kmg ah ay awood Meliteri adeegsan doonan hadii qoysaska rayidka ah ay ka dhago adeegaan inay ka barakacaan guryahooda.
Wareegtadan lagu barakicinayo dadka degen Nawaaxiga Xarunta Madaxtooyada waxaa si aad ah kaga carooday hooyooyinka iyo maatida kunool xaafadahaasi waxayna sheegeen in guryaha laga barakicinayo ay sharci ahaan iyaga iska leeyihiin,balse dowladda kmg ah ay awood u adeegsanayso .
Bil ka hor ayay ahayd markii Ciidamo ka tirsan dowladda kmg ah ay si qasab u bur buriyeen Xaafado ay degen yihiin dad barakacayaal ah oo ku yaala Xaafadda Afsiyooni ee degmada waabari,iyadoona amarka lagu bur buriyay Xaafadahaasi dadka rayidka ay degenaayaan uu kasoo baxay Maamulka gobolka banaadir ee dowladda kmg ah.
« War deg deg ah: Ciidamada Mujaahidiinta oo lawareegay gacan ku dhaynta degmada Ceel-barde gobalka Bakool. Talo Ku Socota Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab »